Recipe Quiche mora - Fomba Fanamboarana
ahoana ny fomba sokitra akoho rotisserie
ny fomba fanamboarana ranona voasarimakirana amin'ny martsa
pie frezy mora miaraka amina frezy
Recipe Quiche mora
izany Recipe Quiche mora manomboka amin'ny crème pie aloha fa tsy tokony hisy hahalala! Entina hamono, fromazy ary tongolo maintso izy ary sakafo maraina na sakafo hariva mora tonga lafatra!
Azonao atao tokoa ny manampy an'izay tianao ao amin'ity recette quiche mora ity - legioma hafa, fromazy na zava-manitra samy hafa - fa ny ham sy fromazy no fomba tianao indrindra hamitana izany. Tsy fantatro ny momba anao, fa izahay tia atody ho an'ny sakafo atoandro ato. Hanao fialan-tsasatra izahay mba hankafizana azy ireo amin'ny sakafo maraina, atoandro na sakafo hariva, ary ity fomba fahandro quiche mora ity dia mampitohy ny elanelana misy eo amin'izy telo. Tiako ny mitazona mora foana ny recette quiche -ko, ary manompo azy ireo amin'ny fomba mahafinaritra voankazo na vaovao mahafinaritra salady !
Atody ho an'ny Brunch
Raha tianao ny atody toa anay, mety tianao koa io Casserole Breakfast amin'ny alina miaraka amin'i Bacon na ity Sakafo maraina Cooker Slow Cooker
Betsaka ny fiovana ao amin'ny fomba fahandro quiche mahazatra, saingy tiako ny hitazomana ny zavatra tena tsotra amin'ity indray mitoraka ity. Manomboka amin'ny crème pie vita amin'ny vata fampangatsiahana izahay ary fenoy ny zavatra tsara rehetra!
Azonao atao tokoa ny mampiasa crème pie efa nialoha ny ela, izay efa nopotserina tao anaty lapoaly fanary raha toa ka tianao ho mora kokoa ity quiche ity, saingy tiako ny manodina ahy ary manendy azy ao anaty lovia pie misy ahy. Amin'izay dia tsy misy tokony hahalala momba ny hitsin-dàlana nalainay!
inona no hohanina amin'ny lasopy tortilla akoho
Torohevitra hanamboarana ity Recipe Quiche mora ity:
Ity fomba fahandro ity dia tena tsy ho mora kokoa - atombohy amin'ny a crust pie mialoha , ary fenoy izany amin'ny zavatra tianao indrindra, miampy atody sy ronono.
Fomba fahandro quiche marobe no ho hitanao fa efa namboarina mialoha ary mila vilany fanampiny miampy fotoana fanomanana fanampiny. Izahay dia mampiasa tongolo masaka, cubed ary tongolo maintso ato amin'ity fomba fahandro ity mba hahazoana antoka fa mirindra haingana araka izay tratra ity fomba fahandro quiche mora maraina ity!
Aza adino ny manara-maso ny quiche rehefa mofomamy - tsy tianao ny volontsôkôlà mena eo amboniny rehefa masaka ny atody! Raha ilaina, manarona ny peratra ivelany amin'ny crust miaraka amina foil kely hanakanana azy tsy handoko intsony.
Raha tsy mpankafy ny crème pie nentim-paharazana ianao dia andramo ny manao a Puff Pastry Quiche na ireto Easy Quiche Mini vita amin'ny fonosana wonton!
Azonao atao ve ny manamboatra quiche mialoha ny fotoana?
Miloka ianao! Rehefa vita ny mofo dia ampangataho mandritra ny adiny roa mandritra ny adiny roa ny quiche, avy eo vata fampangatsiahana. Mba hamerenana indray dia rakofana foil ilay quiche ary endaso mandritra ny 325F (mandra-pahafana fotsiny). Ny fampangatsiahana azy alohan'ny vata fampangatsiahana dia manampy ny crust ho somary crisper.
Ahoana no anaovanao Quiche tsy misy crust:
Raha mitady safidy tsy misy gluten ianao, na tsy mpankafy crust (fotsiny, samy manana ny safidiny isika rehetra!), Azonao atao ny mandingana ilay crust ary mandatsaka fotsiny ilay atody atody ao anaty lapoaly hanamboarana azy ho lasa fomba fahandro quiche crustless. Mora izany!
Aza adino fotsiny ny manosotra ny lovia pie aloha satria ny atody mety ho mafy mivoaka rehefa masaka!
Satria tsy mila mijery ilay crust ianao mba hahitana famantarana ny tsy fahampiana, dia manendasa quiche tsy misy crust fotsiny ianao mandra-pahatongan'ny atody hapetraka tanteraka manerana ny afovoany.
REHETRA MISY MORA REHETRA TSY TIA ANAO
Casserole Breakfast amin'ny alina miaraka amin'ny saosisy - ankafizin'ny fianakaviana mora vidy!
Blueberry Baked Oatmeal - safidy salama sy mamy kokoa
Cookies Sakafo maraina - ho an'ny sakafo maraina eny am-pandehanana
Refrigerator mandritra ny alina Oatmeal
Muffin-tsongo avy amin'ny akondro - mmmm, muffins !!
Fotoana fanomananadimy ambin'ny folo minitra Fotoana fandrahoan-tsakafo35 minitra Fotoana manontolodimam-polo minitra Fanompoana6 servings MpanoratraAshley Fehr Ity Recipe Easy Quiche ity dia manomboka amin'ny crème pie aloha fa tsy misy mila mahalala! Feno hena, fromazy ary tongolo maintso ary sakafo maraina na sakafo hariva mora tonga lafatra! Azonao atao tokoa ny manampy an'izay tianao ao amin'ity recette quiche mora ity - legioma hafa, fromazy samy hafa na zava-manitra.
▢1 crust pie vata fampangatsiahana
▢6 atody lehibe
▢¾ kapoaka ronono na crème
▢¾ sotrokely sira
▢¼ sotrokely dipoavatra mainty
▢1 kapoaka nahandro nahandro voatetika
▢1 ½ kaopy fromazy voakiky nizara roa toko
▢3 tablespoons tongolo maintso
Afanaina hatramin'ny 375 ° F ny lafaoro.
Vahao ny crust pie ary potsero ao anaty lovia pie 9 ', aforeto ny sisiny ambony raha tianao.
Ao anaty lovia lehibe iray dia atotao ny atody, ronono, sira ary dipoavatra.
Afafazo amam-boankazo, fromazy 1 kaopy ary tongolo maintso ao anaty crème pie ary arotsaho eo amboniny ilay fangaro atody. Mamafaza fromazy ½ kaopy sisa tavela eo ambonin ny atody afangaro.
Mofomamy mandritra ny 35-40 minitra mandra-pahatongan'ny fametrahana ny foibe. Avelao hangatsiaka mandritra ny 5-10 minitra alohan'ny hikolokoloana sy hanompoana.
Kaloria:299,Karbohidraty:16h,Proteinina:dimy ambin'ny foloh,Tavy:18h,Tavy mahavoky:7h,Cholesterol:190levitra,Sodium:705levitra,Potasioma:167levitra,Sugar:rOAh,Vitamina A:505IU,Vitamina C:0.6levitra,Kalsioma:208levitra,Vy:1.7levitra
Teny lakilefomba fahandro quiche mora Mazava ho azysakafo maraina masakaMalagasy© SpendWithPennies.com. Voaaron'ny zon'ny mpamorona ny atiny sy ny sary. Ny fizarana an'ity fomba fahandro ity dia sady amporisihina no ankasitrahana. Voarara tanteraka ny maka tahaka sy / na mametaka ny fomba fahandro feno amin'ny media sosialy. Azafady mba jereo eto ny politikako momba ny fampiasana sary .
Avereno ity Recipe Super Breakfast ity
ny fomba fahandro ny ovy voadidy amin'ny grill
REHETRA REHETRA TIANAO TIA
Manaova Muffins atody eo alohan
Biscuits sy gravy